Ny fanatsarana hatrany ny sehatry ny fiompiana no hitan’ny Ben’ny tanàna Marc Ramiaranjatovo sy ny Farmshop fa vahaolana ka olona manodidina ny 300 no nahazo fiofanana maimaimpoana. Vehivavy avokoa ny 250 tamin’izy ireo, niofana in-droa isan-kerinandro nandritra ny iray volana. Anisan’ny nampianarina ireo mpiofana tamin’izany ny resaka fiompiana akoho, kisoa, trondro ary ombivavy be ronono. Omaly no nozaraina tamim-pomba ofisialy ny mari-pankasitrahana nomena azy ireo izay tsy hifarana hatreo akory. Nambaran’ny Ben’ny tanàna Marc Ramiaranjatovo fa mbola hofanina manokana momba ny “gestion” sy ny “management” indray ireo mpiofana ireo ary asaina mandrafitra tetikasa avy eo. Hotsarain’ny Farmshop sy ny kaominina izany ka izay tetikasa 150 isa mendrika indrindra dia hahazo famatsiam-bola 2 hetsy Ar isan’olona hahafahany manatanteraka ny faniriany.